के विषयमा भयाे विश्वव्यापी चासोकाे चिनियाँ राष्ट्रपति सि र उत्तर कोरियाली नेता किमबीच वार्ता? - Nepal Readers
के विषयमा भयाे विश्वव्यापी चासोकाे चिनियाँ राष्ट्रपति सि र उत्तर कोरियाली नेता किमबीच वार्ता?
मङ्गलबार अपरान्ह्सम्म उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनको बारेमा बेखबर जस्तो रहेको बताउने चीनले उहाँको भ्रमणको पुष्टि गरेको छ । भ्रमणमात्र नभएर उहाँ र चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङबीच राजधानी बेइजिङमा भेटवार्ता नै भएको चिनियाँ समाचार समिति, सिन्ह्वाले बुधबार जनाएको छ ।
बुधबार चिनियाँ सरकारी समाचार समिति, सिन्ह्वाले किम बेइजिङमा रहनुभएको र उहाँको भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सिले उहाँलाई बेइजिङस्थित ग्रेट हल अफ चिनियाँ पिपुल्स काँग्रेसमा विशेष सम्मान र स्वागत गर्नुभएको बताएको छ । गएको आइतबारदेखि नै किम चीनको भ्रमणमा रहनुभएको पनि खुलेको छ । तर त्यसलाई चीनले भने मङ्गलबार अपरान्ह्सम्म पनि स्वीकार गरेको थिएन । उत्तर कोरियाली नेता किम वा उक्त देशका अर्का कुनै उच्च सरकारी अधिकारी चीन भ्रमणका क्रममा बेइजिङ पुगेको भन्ने बारेमा आएको समाचार चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता हुवा च्युनिङले हल्लामात्र भन्नुभएको थियो ।
उहाँले विदेश मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा भन्नुभयो– यदि त्यस्तो भ्रमणको समाचार भएको भए हामीले औपचारिक रुपमा नै विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर जानकारी दिइसक्ने थियौँ, त्यस्तो केही होइन र यसबारेमा मलाई केही थाहा पनि छैन । यसअघि मङ्गलबार नै विश्वका सञ्चारमाध्यमले उत्तर कोरियाली नेता किम सुटुक्क बेइजिङ पुग्नुभएको समाचार सार्वजनिक गरेका थिए । यसलाई चीनले लुकाएको उनीहरुले भनेका थिए । यो समाचार पहिलो पटक जापानी सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरेका थिए । ती मिडियाले उत्तर कोरियाली नेता किम रेल चढेर सुटुक्क चीनको राजधानी बेइजिङ पुगेको समाचार प्रकाशन, प्रशारण गरेका थिए । बेइजिङ् र यसको आसपासमा उत्तर कोरियाको जस्तो देखिने रेल पुगेको उनीहरुको भनाई थियो । त्यो समाचारको चीनले भने खण्डन गरेको थियो । तर मङ्गलबार रातिसम्म यो पुष्टि पनि भएको छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनबीच बेइजिङमा छलफल भएको समाचार आएको छ । यसलाई चीन सरकारले नै पुष्टि गरेको छ । सात वर्षपछि पहिलो पटक विदेश भ्रमणमा गएका उत्तर कोरियाली नेता किम र चिनियाँ राष्ट्रपति सिबीच भएको वार्ता नै यतिखेर विश्वका मिडियाको चासोको विषय भएको छ ।
हालैमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किमबीच भेटवार्ता हुने भनी समाचार आएको थियो । उहाँहरुबीच आमी मे महिनाको सुरुवातामा वार्ता हुने बताइएको छ । त्यसैगरी उत्तर र दक्षिण कोरियाबीचको सम्बन्धमा पछिल्लो पटक सुधार आएको नै ठानिएको छ । यी दुई देशबीच पनि आगामी माहिना उच्चस्तरीय बैठकको आयोजनाको तयारीको समाचार आएको हो । संयुक्त राज्य अमेरिकासँग आफ्नो परमाणु र ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमबारे उत्तर कोरियाले सो वार्ता गर्न लागेको भनिएकोमा उक्त वार्ताको अघि यो भ्रमण भएकोले विश्वमा नै चासो बढेको हो ।
यसबीचमा अमेरिकी राष्ट्रपतिले पनि उत्तर कोरियासँग वार्ता गर्नुअघि चीन र जापानसँग पनि छलफल गर्ने बताउनुभएको थियो । आगामी वार्ताहरूमा बेइजिङको भूमिकाको खोजी भइ नै रहेको थियो । यसै सन्दर्भमा उत्तर कोरियाली नेता किमले चीनको भ्रमण गरेबाट अब भने चीनको भूमिकाको झनै बढी मात्रामा खोजी हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस वार्तामा आपसी हितका विविध पक्षमा मात्र कुराकानी भएको सिन्ह्वाले जनाएको छ । सिन्ह्वाले सो भेटमा सुरुमा चिनियाँ राष्ट्रपति दोस्रो पटक राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकोमा किमले बधाई दिनुभयो र राष्ट्रपति सिले धन्यवाद दिनुभएको थियो ।
त्यस्तै राष्ट्रपति सिले पहिलो विदेश भ्रमणका रुपमा बेइजिङ आएकोमा नेता किमलाई धन्यवाद दिनुभएको सिन्ह्वाले जनाएको छ । त्यसैगरी उक्त भेटकाक्रममा कोरियाली प्रायद्वीपमा जारी रहेको अवस्थाका बारेमा पनि कुराकानी भएको बताइएको छ । त्यस बारेमा के कुराकानी भयो र परमाणु उत्पादन र परीक्षणका बारेमा उत्तर कोरियाको केही प्रतिबद्धता आयो या आएन भन्ने बारेमा भने केही बताइएको छैन ।
त्यसैगरी अमेरिका र उत्तर कोरियाका साथै उत्तर र दक्षिण कोरियाको आसन्न वार्ताका बारेमा पनि के कस्तो कुराकानी भए भन्ने बारेमा पनि केही बताइएको छैन ।